♪ Angel Shaper: အိပ်မက်ဆိုး
2 June 2010 at 03:31
ငါ့ညီမ အိမ်မက်လှလှ ထာဝရမက်ပါစေ
2 June 2010 at 03:32
အော်....လူသားအားလုံးလည်း အိမ်မက်လှလှ မက်နိုင်ကြပါစေ
2 June 2010 at 03:33
ဒီလိုပါပဲ။ အိပ်မက်ဆိုးတွေက ခဏတော့ မက်နေရဦးမှာပါ။ တချိန်ချိန်တော့ အိပ်မက်လှလှ မက်တဲ့ အချိန်ကို ရောက်မှာပေါ့။
2 June 2010 at 03:57
ပွေလီနေတာကိုးးး အိမ်မက်လှလှ ဘယ်မက်မလဲ ဟွင့်
အိမ်မက်လှလှမက်ချင်ရင် မနိုးသော အိပ်ခြင်းနဲ့ အိပ် ဒါဆိုရင် စိတ်ချ လှလှလေး မက်စေရမယ် ဟဲဟဲ
အကျင့်ကိုမကောင်းဘူး သူ ပို့စ်အသစ်တင်တာမပြောဘူး ဟွင်းးးနော် အိမ်ကျယ် ကျပ်ကျပ်သတိထား ဒါဗြဲ အဟွင့်
ဘူမှ လာသေးဘူးလားကွ ငါနော် ဝက် တကောင်တည်း ပျင်းလိုက်ထှာာာာာာာာာာာ
တော်ပါဘီ လပ်ကီးဆဲဗင်း ပဲထားလိုက်တော့မယ်နော် မသောင်းကျန်းတော့ပါဘူး ဘိုင် တာ့တာ
ဘယ်တော့မှ ဒီအိပ်မက်ဆိုးက လွတ်မြောက်တော့မယ် မထင်ပါဘူးး(
ဝါး . . . အိပ်မက်ကိုတောင်မှ တင်ပြထားပုံလေးက လှလိုက်တာ. . .။ ဝက်ဝံလေးကတော့ အကြံပေးသွားတယ် အကိုတော့ ပေးတတ်ဘူး။
ကိုယ်က အိပ်ရင် ဘာမှ သိဘူး ...ပျော်နေလို့. . .
2 June 2010 at 04:35
အိပ်မက်မမက်ပဲ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပေါ် အဲလေ အိပ်ပျော်ပါစေကွယ်...“ငါ”လဲ မြန်မြန် ပါနိုင်ပါစေ...ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ရတယ်မှတ်လား...အိမ်း ပါစေကွယ်...
2 June 2010 at 04:37
ဟို ၀က်ကလေး တော်တော် သောင်းကျန်းသွားပါလား...စာမလုပ်ဘူး..ဟွန်းးး နာမယ်...
2 June 2010 at 04:44
ဒီလိုပါပဲဗျာ တစ်ချို့ချို့သောလူတွေပေါ့ လဲကျလိုက် ထသွားလိုက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်အားပေးလိုက် နဲ့အိမ်မက်နဲ့တူတဲ့ လောကကြီးထဲမှာပေါ့။
2 June 2010 at 05:40
တခုခု လိုနေသလိုပဲ ဟဲဟဲ။
ဘယ်နေရာမှ ငါ မပါတာချင်းတော့ အတူတူပါပဲ
မရေရာတဲ့ ဘဝမှာ ပေမယ့် အိပ်မက်ချိုချိုလေးတော့ မက်စေချင်တယ်။
ကိုယ်တိုင်လဲ အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရဆဲ..
အားလုံး အိပ်မက်လှလှ မက်နိုင်ကြပါစေနော်
ညီသေးသေးလေးတို့..၊ ကိုအေအေတူတို့ ရှိတယ်လေကွယ်......။
ကိုဏီကတော့.ဆင်းရဲသားမို့ ခုထိ မဆုံနိုင်ကြသေးဘူး....။
3 June 2010 at 06:48
အိပ်မက်ဆိုးတွေကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီး အိပ်မက်လှလှတွေကို ဘ၀တစ်သက်တာ ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကွယ်...
လူတိုင်း လူတိုင်း အိပ်မက်ဆိုး တွေ မက်တတ်ကြတာပါပဲလေ.. အိပ်ရာနိုးရင် မေ့လိုက်ပါတော့..။
ညီမကို add ပေးလေ
အော်ခက်တည်တည်နဲ့..လိမ်းစားတာလား။ ဆားချက်တာလား..။ရေးစရာမရှိလို့ ...လား။... လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးနီကို သတိယတယ် အုန်သီးတွေ အဲ အုန်ကျွန်းတွေ ခွက်သံ တွေ ကြားရတော့ဝူး ဟိုလူကြီးဆို မိန်းမနဲ့ ခွဲရတာ ငိုဝူးတဲ့ ..ဦးနီ.. လစ်သွားတည်းက ၇ရက်လောက်လွမ်းဖျား လွမ်းနာကျနေတာ လေ။ ပြန်မပြောနဲ့ နာပြောတယ်လို့နော်။
အော် အိပ်မက်ဆိုးထဲကရုန်းထွက်ဖို့ တစ်ခုခုတော့လိုမယ်ထင်တယ်..
သူငယ်ချင်းရေ တစ်ချိန်ချိန်တော့ အိပ်မက်လှလှ မက်နိုင်မှာပါ။ အိပ်မက်ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်ရဲ့ တမန်တော် ဆိုပါစို့ ငါတို့ အချိန်ခဏလောက် ဆွဲဆန့်ထားလိုက်ရုံနဲ့ ပြည့်စုံလာမှာပါ နင့်ခံစားချက်ကို နားလည်ပါတယ်ဟာ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ငါလည်း........
ချက်ချင်းထလို့ မရသေးတော့ ဆိုးနေတဲ့ အိမ်မက်ကိုပဲကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့။
ဘ၀ဆိုတာအိမ်မက် မက်နေတာပါ ...
နေ့ာက်တော့ လည်းအားလုံးပြီးဆုံး သွားတာပါပဲ ...
မက်နေစဉ်တော့အလူးအလဲ ခံစားရတာပေါ့...
အိမ်မက်ဆိုး ဂယ်ပဲ ထပ်မ မက်ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။ အနော်ကို ပုံမှန်ကတော့ လက်တို့ ထား တယ် .. ဂျယ်ဂျယ် အတွက် ရေးနေတယ် ပြောတယ် ... ကြို ဖွထားခဲ့ P .. အဟိ